भारत र पाकिस्तानबीच आणविक युद्ध भए के होला ? – Hamrosandesh.com
भारत र पाकिस्तानबीच आणविक युद्ध भए के होला ?
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतविरुद्ध आणविक अस्त्र प्रयोगको सम्भावना समेत औल्याए । अल जजिरासँगको अन्तवार्तामा उनले परम्परागत युद्धबाहेकको विकल्पमा आणविक युद्ध हुने बताएका हुन् । के पाकिस्तानले भारतविरुद्ध आणविक अस्त्रको प्रयोग गर्ला ? अस्त्रको प्रयोग गरेमा के होला ? त्यसको जवाफ भारतले कसरी देला ? यो परिकल्पनाको विषय हुनसक्ला ।
सन् १९९८ मा पाकिस्तानले आणविक अस्त्रको परीक्षण गरेर आणविक हतियारले सम्पन्न पहिलो मुस्लिम देश बन्यो । भारतले सोही वर्ष आणविक अस्त्रको परीक्षण गरेपछि पाकिस्तानले पनि गरेको हो । भारतसँग युद्ध लडिसकेको पाकिस्तानले प्रतिरक्षाका लागि अस्त्र परीक्षण गरेको दाबी गर्यो । यसले दक्षिण एशियामा अणविक अस्त्रको होडवाजी बढायो ।
भारतसँग पाकिस्तानको भन्दा बढी सैन्य क्षमता छ । परम्परागत युद्ध लड्यो भने भारतको तुलनामा पाकिस्तान कमजोर छ । तर, आणविक अस्त्रको परिमाणका हिसाबले पाकिस्तानसँग भारतको भन्दा केही बढी आणविक हतियार छ । स्टकहोम इन्टरनेशनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटको सन् २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार पाकिस्तानसँग १४० देखि १५० आणविक हतियार छ भने भारतसँग १३० देखि १४० आणविक हतियार छ । दुवै देशसँग एक अर्कामाथि प्रहार गरेर ठूलो नोक्शानी पुर्याउने क्षमता छ ।
भारतले आणविक अस्त्र जडित क्षेप्यास्त्र जल, थल र आकाशबाट मार हान्ने क्षमता राख्छ । पाकिस्तानले समुन्द्रबाट प्रहार गर्ने क्षमताको विकास गरिसकेको छैन । उसले यसमा प्रयास गरिरहेको छ ।
भारतले आणविक अस्त्र विकास गर्नुमा चीनसँगको युद्ध कारण हो । चीनसँगको युद्धपछि उसले आफूलाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक ठानेर अस्त्रको विकास गरेको हो । पाकिस्तानले भारतसँगको युद्धपछि यसको विकास गर्न थालेको हो । पाकिस्तानलाई अरब मुलुकहरुले आणविक अस्त्रको विकासमा सहयोग गरेका थिए । भारतले आफ्नै बलबुतामा आणविक अस्त्रको विकास गर्यो । पाकिस्तान सैन्य क्षमता विकास देखि अस्त्रमा समेत अरबका मुलुकहरुको आर्थिक सहयोगमा निर्भर छ । विशेषगरी साउदी अरबले पाकिस्तानलाई आर्थिक सहयोग गर्छ । भारत आर्थिक रुपमा आफै सामथ्र्यवान छ । उसले चन्द्रमामा समेत यान पठाइसकेको छ । भारत अन्तरीक्ष सेनाको विकास गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
आणविक अस्त्रले सम्पन्न भएकाले भारत र पाकिस्तानबीचको युद्ध खतरनाक हुनसक्छ । यसले दक्षिण एशियाको शान्तिलाई खलबलाउन सक्छ । आणविक अस्त्रको प्रयोग एक अर्कामाथि गरेमा ठूलो जनधनको क्षति हुनसक्छ ।
भारतको अणविक अस्त्र जति सुरक्षित मानिन्छ पाकिस्तानको मानिदैन । भारतको आणविक अस्त्र आतंकवादी समूहको हातसम्म पुग्ने सम्भावना छैन । तर, पाकिस्तानमा रहेको आणविक हतियार आतंकवादी समूहको हातमा पुग्ने खतरा औल्याइएको छ । पाकिस्तानसँग भएको आणविक हतियार कट्टरपन्थी तालिवान या अलकायदाको हातसम्म पुग्ने चिन्ताले विश्वका शक्तिशाली देशहरुलाई सतर्क भएका थिए । तालिवान र अलकायदा अफगानिस्तान र पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा बढी सक्रिय हुनुले यसो भएको थियो । त्यसमाथि अलकायदा नेता ओसामा विन लादने पाकिस्तानको अवोटावादमा अमेरिकी कमाण्डो हमलामा मारिए ।